हात्ती छिर्ने एयरपोर्टमा १५० ग्रामको मोबाइल नछिर्ने ? – Globalpatrika
समय समयमा आफ्नो गहकिला लेख र विचारहरु सामाजिक संजाल मार्फत दर्शकहरुको सामु ब्यक्त गर्ने गर्नुहुन्छ मनिष केसी । पछिल्लो समय सरकारले विदेशबाट हवाइ यात्रुले ल्याउने सामानमा कडाइ गर्न थालेपछि यसबारे विविन्न खाले टिका टिप्पणी हरु भैरहेका छन् । धेरै समय अगाडि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएका मालवस्तुमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा भन्सार महसुल छुट दिन सक्ने प्रावधानको कार्यान्वयनमा सरकार उत्रेको हो ।
सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएका मालवस्तुमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा भन्सार महसुल छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ । अहिले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले सरकारले राजश्व उठाउने नाममा गरिब जनताको पेटमा लात हान्ने ब्याख्या गर्न थालेका छन् । यसैं सन्दर्भमा मनिष केसीले पनि आफ्नो प्रतिकृया दिनु भएको छ । उहाँले फेसबुक स्ट्याटस मार्फत हात्ती छिर्ने एयरपोर्टमा १५० ग्रामको मोबाइल नछिर्ने ? भनेर सरकारी कदमको कटाक्ष तथा विरोध जनाउनु भएको छ ।
उहाँ ले लेख्नु भएको स्टाटस जस्ताको तस्तै :
“टर्लक टल्किने सुनको हात्ती लमक लमक गर्दै आउदा कालो बुट ड्याम्म पछार्ने! सोही ठाउमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले आखामा कालो चस्मा लगाउने! बिदेशी मुलुकका पाहुनाहरुले एयरपोर्ट लाई नै च्यालेन्ज दिएर हिड्ने! यस्तो हालत भएको मेरो देशको एयरपोर्टमा आमाको लागी, श्रीमतिको लागि मायाले किनेको एक एक वटा मोबाइल छिराउन नपाउने!उसले तोकेको भन्दा पाँच ग्राम ज्यादा सुन लिएर गयो भने ठोकेर भन्सार गोजि तिर हालिन्छ! साथी भाइ कस्का हुदैनन? यसो साथी आउदै छ खुसी मनाउला भनेर मगाएको एक बोत्तल रक्सी फालिन्छ! ए बाबा ल ठिकै छ बिदेश बाट पनि ती सामानहरु लैजान पाइदैन भने चित्त बुझाउला तर बिश्वका भि.आइ.पि एयरपोर्ट बाट चाहिँ मज्जाले ल्याउन मिल्ने रे नेपाल पुगे पछि एयरपोर्टमा छोड्नु पर्ने कस्तो नियम हो?
आमाले माया गरेर पठाइदिएको एक पोका गुन्द्रुक र अचार पनि ल्याउन नपाइने? रेमिटेन्सले धानेको देश होइन र नेपाल? अनि किन त रेमिटेन्स कमाएर फर्केका युवालाई एयरपोर्ट मै अपहेलना गर्ने?? तिमिहरुलाई राख्न मन लागेको सामान लैजान मिल्दैन भनेर लुकाएर राखिहाल्ने? अहो गरिब लुटतंत्र कहिले सम्म सहनुपर्ने हो सरकार? हात्ती छिर्ने एयरपोर्टमा १५० ग्रामको मोबाइल नछिर्ने? युवाहरु कसरी आँसु बगाउदै प्रदेश लाग्छन थाहा छ? काठमाडौ बासिलाई पुग्ने पानी खोज्न मेलम्ची होइन एयरपोर्ट जा सरकार!”